“विवाद रहित ढंगले फोटो पत्रकारीता अवार्ड सम्पन्न गर्नेछौँ”- प्रदिप राज वन्त । – बिशेष अन्तर्वाता « Light Nepal
Published On :2April, 2018 9:01 pm
काठमाडौं १९ चैत । काठमाडौंमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) ले यहि बैशाख १३ गते फोटो पत्रकार अवार्डको आयोजना गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसर पारेर अवसर पारेर उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको केन्द्रिय सचिव प्रदिप राज वन्तले लाइटनेपाल सँगको कुराकानीमा बताए ।
फोटो पत्रकार अवार्डको तयारी कस्तो छ ?
हामी तयारीको मध्यविन्दुमा छौं । कसरी कार्यक्रम सफल पार्ने, यसलाई कसरी राष्ट्रिय स्तरको अवार्डको रुपमा विकास गर्ने प्रयास गरीरहेका छौं । अहिले सम्म ५० प्रतिशत अवार्डको क्याटगरीहरु फाइनल भैसक्यो । अहिले हामीले गएको मंगलवार पत्रकार सम्मेलन पछि आवेदन फाराम आउने क्रमजारी छ । हामीले मागे अनुसार देशै भरीका फोटो पत्रकार साथीहरुले आवेदन फाराम भरिरहनुभएको छ यसले हामी निकै उत्साहित छौं ।
अवार्डमा मुलुकभित्रका फोटो पत्रकार मात्र सहभागी हुन्छन् वा मुलुक बाहिरका पनि छन् ?
अहिले पहिलो चरणमा हामीले मुलुक भरीका पत्रकारहरुलाई मात्र सहभागी गराएका छौं । हाम्रो उद्येश्य हाम्रो देशको फोटो पत्रकारीताको स्तर उन्नती र ब्यवासायीक विकास हो । त्यसैले हामीले देश भित्रका साथीहरुलाई मात्र सहभागी गराएका हो । भोलीका दिनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका साथीहरुलाई पनि सहभागी र सम्मान गर्ने सोच बनाएका छौं ।
पछिल्ला गतिविधिका बारेमा प्रकाश पारीदिनुहोस्
हिंजो मुलुकभरी कति साथीहरु पत्रकारीतालाई आफ्नो पेशा बनाएका छन् भन्ने थाहा हुदैनथ्यो । हिंजोका दिनमा मुलुकभरी नगन्य साथीहरु मात्र यो पेशामा आवद्ध थिए । अहिले धेरै पत्रकार साथीहरु फोटो पत्रकारीतामा छन् । उनीहरुले यसलाई नै आफ्नो पेशा बनाएका छन् । अहिले फोटो बिनाको पत्रकारीताको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । हामी अहिले फोटो पत्रकारीता मल्टीमिडियामा गएका छौं । अहिले फोटो मात्र होइन, भिडियो खिच्ने त्यसलाई सम्पादनगर्नेहरु पनि हाम्रो फांटमा आएका छन् । हिंजो भन्दा आज हाम्रो क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको छ । यहां आए पछि मेरो भविष्य यसैमा छ मल्टीमिडियामा जान सक्छु भन्ने विश्वासका लागि हामीले फोटो पत्रकार अवार्डको आयोजना गर्न लागेको हो । यो देशैभरीका पत्रकारका लागि हो । सबै बिधाका फोटो पत्रकारहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । फाराम भर्ने अवधि चैत ३० सम्म हो । १२ इन्टु १८ साइजको कम्तिमा ५ वटा फोटो समावेश गरेर पत्रकार साथीहरुले आवेदनगर्न सक्नुहुनेछ ।
अवार्डको रिजल्ट निश्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?
फोटो पत्रकार साथीहरु त्यसै पनि निश्पक्ष ढंगले सहभागी हुनु हुनेछ । उहांहरुले पेश गरेको फोटोहरुले नै निश्पक्षता बोल्छ । हामिले अवार्डमा सहभागी हुनका लागि र हामीले परिधि राखेका छौं । त्यो परिधि आफै बोल्छ । हामीले फोटोको ब्याख्या गर्ने बढाई चढाई गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले यसको निश्पक्षतामाकतै पनि शंका गर्ने ठाउं छैन । हामीले गतवर्ष पनि विवाद रहित ढंगले अवार्ड सम्पन्न गरेका थियौं अहिले पनि त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो । सबै अवार्डमा संधै विवाद हुन्छ भन्ने छैन हामीले त्यो प्रमाणीत गरेर देखाउंछौं । म्यानेजमेन्ट र जुरी मेम्मरमा हामीले विशेष ख्याल गरेर अवार्ड सम्पन्न गर्नेछौं । भिडियो सहित :-
नरिबलको तेलबाट लिनुहोस् चमत्कारिक फाइदाहरु ‘भिडियो सहित्’
धेरै पहिलावाट नै हामिले नरिवलको तेललाई प्रयोग गदै आएका छौ । नरिवलको तेललाई विशुद्ध प्राकृतिक